Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » 2 siyaabood oo cusub oo loo kariyo hilibka doofaarka: macaan oo jilicsan
Hilibka doofaarku waa mid ka mid ah maaddooyinka wax lagu kariyo ee ugu caansan, laakiin samaynta suxuunta hilibka doofaarka ku salaysan way fududahay in la sheego. Ma ahan guul sahlan in la kariyo hilibka doofaarka oo la ilaaliyo dhadhan jilicsan oo siman. Iyadoo taas la yiraahdo, si loo kariyo cunto dhadhan fiican leh, maaddooyinka cusub iyo kuwa tayada sare leh waa qasab.
Iyada oo ujeedadu tahay in la siiyo dadweynaha guud ee Hong Kong dhadhan dhadhan fiican leh iyo hilib doofaar oo jilicsan oo tayo sare leh, "Hong Kong Heritage Pork" aasaasaha John Lau Hon Kit wuxuu u heellan yahay taranka doofaarka Iberico ee deegaanka "Tai Chi Pig" oo ku habboon dhadhanka. dadka deegaanka Hong Kong. Si aad si fiican uga faa'iidaysato maaddooyinka tayada sare leh sida hilibka laga helo "Hilibka Hidaha ee Hong Kong" ee uu qoray John Lau Hon Kit, si aad u kariso suxuunta hilibka doofaarka ee macaan, jilicsan iyo dhadhanka leh, waxaad u baahan tahay talooyin. Hoos waxaan ku sharaxnay 2 tabo oo sare oo ku saabsan sida loo diyaariyo loona kariyo hilibka doofaarka taasoo u horseedi doonta cunto kariye u qalma!
Marka la diyaarinayo hilibka doofaarka, dadka intooda badan waxay ku luqluqdaan jeexan hilibka oo biyo ah oo qallajiya ka hor intaanay karin. Si kastaba ha ahaatee, hilibka doofaarka laftiisa ayaa leh macaan yar, gaar ahaan doofaarka Tai Chi ee uu kiciyay John Lau Hon Kit, kuwaas oo dabiici ah udgoon iyo macaan. Haddii lagu luqluqdo biyo nadiif ah, dhadhanka umami ee hilibka doofaarka waa la dhaqi doonaa.
Si loola dagaallamo luminta dhadhanka umami ee hilibka doofaarka, waxaa lagu talinayaa in la gooyo jarjar hilibka ee xal milix iyo biyo - habkan waxaa loo yaqaannaa brining. Tani waxay u oggolaanaysaa hilibka doofaarka inuu nuugo oo ka ilaaliyo biyaha milixda iftiinka iyo biyaha, taas oo kordhisa qoyaanka iyo dhadhanka hilibka. Waxaa intaa dheer, marka hilibka doofaarka la dubay, wuxuu sidoo kale ka jilicsan yahay bararka iyo furfurnaanta fiilooyinka muruqa. Habka qashin-qubka wuxuu ku dabinyaa dareere aad u badan gudaha hilibka doofaarka taasoo ayan dhammaan ka bixi karin inta lagu jiro habka karinta, abuurista qayb qoyan oo casiir leh oo hilib ah.
HSLOW HILIBKA KARIN
Marka lagu daro hababka diyaarinta, habka aad u kariso hilibka iyo heerkulka aad isticmaasho waxay sidoo kale saameyn kartaa habka hilibka doofaarkaagu u soo baxo. Haddii aad karsato hilibka doofaarka, heerkulka sare wuxuu soo saari doonaa fal-celin kiimikaad ah oo ka soo baxa fiilooyinka hilibka, taasoo ka dhigaysa hilibka doofaarka mid adag oo burburinaya dhadhankii asalka ahaa.
Maadaama heerkulka sare uu diidi doono tayada hilibka, cunto karis tartiib ah oo heerkul hoose ah ayaa ku habboon ilaalinta jilicsanaanta iyo dhadhanka. Cunto karinta oo tartiib tartiib ah waxay la macno tahay in muddo dheer lagu kariyo heerkul aan sarreyn iyo habka sous vide, taas oo ka hortagi karta in hilibka doofaarka uu ku dhaco heerkul sare isla markiiba, taas oo ka caawisa in ay xirto qoyaanka iyo ilaalinta hilibka. Intaa waxaa dheer, heerkulka hooseeya, cunto karinta tartiib tartiib ah waxay ka hortagi kartaa wax kasta oo nafaqo ah oo ku dhaca heerkulka sare, iyo sidoo kale hoos u dhigista oksaydhka dufanka, si uu doofaarku u ilaaliyo jilicsanaanta iyo dhadhanka macaan.
Talada cunto karinta ee qunyar-socodka ah: Iberico Doofaarka Doofaarka oo leh subag iyo dhir
Waxa la yidhi oo dhan, waxaad si fudud guriga ugu kari kartaa suxuunta hilibka doofaarka ku salaysan oo gaabis ah. Isticmaalka hilibka doofaarka ee Tai Chi ee uu kiciyay John Lau Hon Kit oo raacaya habka hoose ee cuntada, waxaad si fudud u samayn kartaa maraq hilib doofaar ah oo tartiib tartiib ah oo leh subag iyo geedo yaryar.
2 jarjar oo ah hilibka doofaarka Tai Chi oo uu koriyey John Lau Hon Kit, 1 qaado oo subag ah, milix badda, milix, basbaaska madow, iyo toonta si ay u dhadhamiyaan
1. Ku dar hilibka doofaarka ee Tai Chi ee Hong Kong Hidaha Hidaha ee Doofaarka (John Lau Hon Kit) ku rid xal khafiif ah oo biyaha milixda ah 30 daqiiqo
2. Ku qalaji hilibka doofaarka ee Tai Chi ee beerta John Lau Hon Kit tuwaal waraaq ah oo jaakad leh subag, xawaash iyo basbaas madow oo u daa marinate ilaa 1 saac.
3. Ku rid hilibka doofaarka ee Tai Chi ee John Lau Hon Kit ku rid bac vacuum xidhan oo loogu talagalay cunto karis tartiib ah.
4. Dabool kariyaha qunyar socodka ah qaabka karinta ama foornada uumiga 65 darajo Celsius 2 saacadood.
5. Toonta ku dub digsi hoose oo fidsan, ku dar garoocad doofaarka ah oo qunyar loo kariyey, ka dibna isku shiil labada dhinac ilaa 2 daqiiqo mid kasta.
6. Ku shub maraqa hadhaaga ee bacda vacuum-ku-xidhan ee maraq doofaarka oo ku raaxayso.
Ku saabsan "Tai Chi Pig" oo uu kiciyay John Lau Hon Kit
Sannado badan oo cilmi baaris iyo taran ah ka dib, doofaarka Tai Chi ee uu koray John Lau Hon Kit wuxuu ka kooban yahay qulqulka doofaarka British Burke, jilicsanaanta doofaarrada Danish Landrace iyo midabka cas ee firfircoon ee doofaarka Duroc ee Isbaanishka. Casiir leh oo jilicsan oo leh qadarka saxda ah ee dufanka, hilibka doofaarka Tai Chi ee macaan oo udgoon waxaa loogu talagalay iyadoo maskaxda lagu hayo dhadhanka dadka Hong Kong.